Impilo Kunye Namayeza Izilayidi
Ukucinywa kwamandla kweThebhulethi ye-Android kunye neenketho zokulala
Zintathu iindlela zokuvalelisa kwithebhulethi yakho ye-Android; inye kuphela yazo ibandakanya ukuqesha i-steamroller. Ezinye iindlela ezimbini zibhalwe apha ngezantsi.
Ungayitshixa njani ipilisi ye-Android
Ukutshixa ithebhulethi kuyinto eyojiweyo: Cofa nje amandla / iqhosha lokutshixa. Umboniso umnyama; ithebhulethi yakho itshixiwe.
Ithebhulethi yakho ye-Android isasebenza ngelixa itshixiwe; ifumana i-imeyile kwaye ingadlala umculo, kodwa ayisebenzisi amandla amaninzi njengoko ibiya kwenza umboniso uvuliwe.
Ithebhulethi iya kuthi ichithe ixesha elininzi itshixiwe.
Ukutshixa ithebhulethi akufani nokucima ipilisi. Kufana ngakumbi nemowudi yokulala yekhompyuter. Ewe, ithebhulethi evaliweyo ihlala ichazwa njengepilisi yokulala okanye yokulala.
Naliphi na ixesha okanye iialamu ozibekayo zisasebenza xa ithebhulethi yakho itshixiwe.
Ukuvula ithebhulethi yakho, cinezela kwaye ukhulule Amandla / Tshixa iqhosha.
Ukusetha ixesha lokutshixa kwethebhulethi ye-Android
Ungayifaka ngesandla ithebhulethi yakho nangaliphi na ixesha ngokucinezela iqhosha lePower / Lock. Kungenxa yoko le nto ibizwa ngokuba nguMandla / Tshixa iqhosha. Xa ungayitshixi ngesandla ithebhulethi, itshixa ngokuzenzekelayo emva kwexesha elinikiweyo lokungasebenzi.
ifumaneka nini i-generic viagra
Ungalilawula ixabiso lokuphuma kwethebhulethi ngokwakho, enokuseta naphi na ukusuka kwimizuzwana eyi-15 ukuya kwi-1 iyure. Thobela la manyathelo:
Kwiskrini saseKhaya, chukumisa i icon yeNkqubo.
Vula usetyenziso lweesetingi.
iziphumo ebezingalindelekanga zeLyrica
Khetha ixesha lokuphuma kwescreen.
Khetha ixabiso lokuphuma kuluhlu olunikiweyo.
Chukumisa i icon yasekhaya ukubuyela kwiscreen seKhaya.
Isibali-xesha esivaliweyo siqala emva kwexesha lokungasebenzi. Ngokukodwa, xa ungachukumisi isikrini, isibali-xesha siqala ukukhathaza. Malunga nemizuzwana emi-5 ngaphambi kokuphuma kwexesha, isikrini sokuchukumisa siyancipha. Emva koko iyacima kwaye ithebhulethi yakho iyatshixa. Ukuba uchukumisa isikrini ngaphambi koko, isibali-xesha sisetiwe ngokutsha.
Ungayicima njani ithebhulethi ye-Android
Ukucima ithebhulethi yakho, thobela la manyathelo:
Cinezela kwaye ubambe Power / Tshixa iqhosha.
Uza kubona imenyu yeenketho zeDivayisi.
Ukuba uyayikhupha inkukhu kwaye awufuni ukuyicima ithebhulethi yakho, chukumisa uphawu lwangasemva.
Chukumisa into yokuCima uMbane.
Ithebhulethi ye-Android iyazicima.
Ithebhulethi ayibaleki xa icinyiwe, ke ayizukukhumbuza ii-aphoyintimenti kwaye ayizukuqokelela i-imeyile, kwaye awuyi kuva naziphi na ii-alamu ozibekileyo. Ithebhulethi ayizukucaphuka ngokuba uyicimile, nangona usenokubona inzondo xa uyijika kwakhona.
Inketho yokuqalisa kwakhona inokungafumaneki kuzo zonke iipilisi ze-Android.
Ezinye iitafile zinokukhetha indlela yokuThula endaweni yeempawu zesandi.
Imenyu yeenketho zeDivayisi inesihloko esithi Iinketho zeThebhulethi kwezinye iipilisi ze-Android. Ezinye iipilisi azinakho ukubeka umxholo kwimenyu konke konke.
I-pantoprazole sod dr 40 mg ithebhu
Qinisekisa ukuba ithebhulethi yakho igcinwe kwindawo ekhuselekileyo ngelixa icinyiwe.
I-Clavacillin (amoxicillin trihydrate / clavulanate potassium) Amacwecwe ezilwanyana
Ulufumana njani ulawulo lweeFomu zeDeshibhodi kunye neeNgxelo
Uyenza njani i-Macwall yakho yeCatalina Firewall
Ukuqonda ingxolo kwifoto yedijithali
I-S489 70 mg (iVivvanse 70 mg)
Kucace gca kumanqatha
I-180 mg Andrx 598 (ICartia XT 180 mg)
Ungamamela njani kwiRadiyo kaHam
Ukuseta iRouter ngeFirewall
Indlela yokwenza i-Crochet ye-Crochet e-Reverse Single Stitch
Ngaba iqanda lenza irhasi
Nora ube kunye nokuncancisa
Unyango lwe-chlamydia yethamo le-azithromycin
I-chlorhexidine gluconate yothambisa ngomlomo